“म २० वर्षकी भए र के’टासाथीसँग यौ, नसम्बन्ध राखिसकेकी छु, मेरो अर्कै केटासँग बिहे हुदैछ फेरि भ’ र्जिन हुन के गर्नु पर्ला ?” – Ap Nepal
“म २० वर्षकी भए र के’टासाथीसँग यौ, नसम्बन्ध राखिसकेकी छु, मेरो अर्कै केटासँग बिहे हुदैछ फेरि भ’ र्जिन हुन के गर्नु पर्ला ?”
April 2, 2022 194
म २० वर्षकी भएँ । मैले आफ्नो केटा.साथीसँग धेरै पटक यौन’ सम्बन्ध राखेकी थिएँ । अहिले उसले मलाई छोडेको एक वर्ष भयो । मेरो परिवारबाट अर्को के टासँग विवाह गराइँदैछ । म भर्जिन छैन । त्यसैले मैले यौन सम्बन्ध राखेको थाहा हुन नदिन के गर्नुपर्छ ? मेरो भनाइको अर्थ फेरि भर्जिन हुन के गर्नुपर्ला ?
विवाहपूर्व यौनसम्पर्क गरेकै भरमा विवाहित जीवन नचल्ने होइन, अन्यथा पुनर्विवाह गर्नेहरूको जीवन जहिले पनि दु:खद हुने थियो । कुनै यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएका कारणले शारीरिक रूपमा यौनसुख लिनेदिने कार्यमा संलग्न हुन नसक्ने पनि होइन । यदि असर पर्छ भने मनोसामाजिक रूपमा । अर्को व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क गरेको थाहा हुनुलाई धेरैले अप्रिय मान्छन् । यस्तो कुरा यौनाङ्गको स्वरुप हेरेर होइन, कसैले भनिदिएर थाहा पाइएको देखिन्छ ।-पुर्वेलीन्युजबाट।
Prevभवन उद्घाटन गर्न रामकुमारी झाँक्री धनकुटा पुग्दा एमाले सांसदले अघिल्लै दिन गर्दिए उ द्घाटन
Nextपल शाहको अन्तिम फै सला न आउदै बाहिरियो यस्तो हल्ला,वकिलसंगको कुराकानीले यस्तो द र्शायो-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
धनकुटाको सहिदभुमिमा अपाʼङ्गता परिचय पत्र वितʼरण शूरु
भोली सोमबारे औंसीको रात,गर्नुहोस चुप-चाप यो एउटा कार्य लाभ मिल्छ।